Khadka Dhexe Ee Chelsea Jorginho Oo Ka Hadlay Hadii Uu Doonayo Ku Laabashada Napoli
HomeWararka Ciyaaraha Maantakhadka dhexe ee Chelsea Jorginho oo ka hadlay hadii uu doonayo ku laabashada Napoli
April 10, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea Jorginho ayaa qirtay inuu doonayo inuu ku laabto Napoli , halkaasoo uu ku qaatay afar sano ka hor inta uusan ku biirin Blues London.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Talyaaniga ayaa saameyn ku yeeshay kulankii ay Chelsea 2-0 kaga badisay Porto lugtii hore ee wareega 8da Champions League, isagoo caawiye ka ahaa goolkii furitaanka Mason Mount .
Jorginho ayaa ku soo biiray kooxda Roman Abramovich sanadkii 2018 isaga oo ugu biiray lacag dhan 50 milyan oo euro waxana uu sii waday in uu dhaliyo 16 gool isaga oo soo saaray 4 caawiye 128 kulan oo uu u saftay kooxda.
Ka dib ciyaartii habeenka Arbacada, 29 jirkaan ayaan meesha ka saarin inuu ku laabanayo Naples markii uu la hadlayey Sky Sports News : “Markaad ku nooshahay Naples waligaa ma iloobi kartid. iyo taageerayaasha.
“Hada si daacad ah kama fikirayo arintaas maxaa yeelay waxaan diirada saarayaa dhamaan Chelsea, laakiin hadii ay suurta gal tahay, maalin maalmaha ka mid ah, ma ogidin goorta, aad soo laabaneyso, dabcan waan jeclaan lahaa.
Xilli ciyaareedkan, Jorginho ayaa 30 kulan u saftay Blues, waxaana uu kooxdiisa ku soo kordhiyay 7 gool.